‘क्लब हाउस’मा दर्जनबढि नेपाली सेलिब्रेटी, हेरौ को-को छन् ? (भिडियो सहित) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०९, २०७८ समय: २१:१८:५०
इटहरी/ नेपालमा सामाजिक संजालको प्रभाव निकै नै छ । यसको लोकप्रियतासंगै सकारात्मक त छदै छ नकारात्मक असरहरु पनि दैनिक जसो हुने गरेको छ । छिटो सुचना पाउन, आफ्नो गतिविधि साझेदार गर्न, टाढा रहेका आफन्त तथा साथीभाइ संग भिडियो र अडियो मार्फत कुरा गर्न पाउने हुदा सामाजिक संजाल नजिकको साथी बनेको छ । फेसबुक, टिकटक, ईन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर लगायत सामाजिक संजाल नेपालमा लोकप्रिय छन् । यसैबीचमा अर्को सामाजिक संजालले नेपालमा आफ्नो पकड बनाउन थालेको छ । अडियो प्लेटफर्मको रुपमा लोकप्रियता कमाउदै गएको ‘क्लब हाउस’ले नेपालिको मन जित्न सुरु गरेको छ । यसो भन्दै गर्दा नेपाली सेलिब्रेटिहरु चाहिँ को को छन् क्लब आउसमा ? भन्ने जिज्ञाशा लाग्न सक्छ । आज हामी त्यही बिषयमा कुराकानी गर्दैछौ । अन्य सामाजिक संजालमा झै क्लब हाउसमा सिधै आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सकिँदैन ।
मिस नेपाल २००२ कि बिजेता, टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता तथा अभिनेत्री माल्भिका सुब्बा, मोडल तथा २०१७ कि मिस नेपाल ईन्टरनेसनल नीति शाह, अभिनेत्री वर्षा राउत, अभिनेत्री केकि अधिकारी, अभिनेत्री रिचा शर्मा, अभिनेत्री प्रीयंका कार्की, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, गायक तथा गीतकार कालीप्रसाद बास्कोटा, अभिनेता, फिल्म निर्माता तथा नेपाल आईडल होस्ट असिम शाह, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त, कलाकार रबिन्द्र सिह बानिया, अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट रिमा विश्वकर्मा, अभिनेत्री बेनिशा हमाल, मोडल रियाशा दाहाल, अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा, अभिनेत्री तथा मोडल सन्ध्या केसि, अभिनेता सलोन बस्नेत र मोडल निराजन बस्नेत लगायत कलाकारहरु क्लबहाउसमा छन् । हामीले उनीहरुलाई कतिले फलो गरेका छन् र उनीहरुले क्लातिलाई फलो गरेका छन् ? लगायतका जिज्ञाशालाई समेट्दै यो भिडियो बनाएका छौ ।
क्लब हाउस प्रयोगकर्ता बन्नको लागि अर्को क्लब हाउस प्रयोगकर्ताले इन्भाईट गर्नुपर्छ । मार्च २०२० मा अल्फा एक्स्प्लोरेसन कम्पनीले पहिलो पटक यो एपलाई आईफोन प्रयोगकर्ताहरूका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । यही महिना क्लब हाउस एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि पनि सार्वजनिक गरिएको छ । आफ्ना मनपर्ने कलाकारलाई नजिकबाट उनिहरुको गतिविधि नियाल्नको लागि फ्यानको एउटैमात्र उपाय हो सामाजिक संजाल । अन्य सामाजिक संजालमा जस्तै यस्मा पनि फलो गर्न मिल्छ । नेपाली सेलिब्रेटीको कुरा गर्दा अहिले यसमा दर्जन बढी प्रयोगकर्ता भैसकेका छन् । हामिले खोज्दै जादा केहि नेपाली चलचित्र सेलिब्रेटिहरुले राम्रै फलोअर्स कमाईसकेका भेट्यौ ।
यो सामाजिक संजाल नितान्त अडियो प्लेटफर्म हो । यसमा न कुनै स्ट्याटस, न कुनै फोटो तथा भिडियो पोस्ट गर्न मिल्छ । यसमा राख्न र देखिन मिल्ने भनेको एकाउन्टको प्रोफाईल फोटो तथा प्रयोगकर्ताले राखेको आफ्नो बायो मात्रै हो । यी प्राय: सेलिब्रेटिले एकअर्कालाई फलो गरेको देखिन्छ । क्लब हाउस मार्फत नेपाली चलचित्र सम्बन्धी विविध बिषयमा बहस पनि हुने गरेको छ । यो एपमा तीन किसिमका भर्चुअल रुम छन् । जुन हो ‘ओपन रुम, सोसियल रुम र क्लोज्ड रुम’ । यो ३ ओटै रुमको आ-आफ्नै नितिनियमहरु छन् । यी रूममा वक्ता, श्रोता र आयोजक हुन्छन् । रूम बनाउने आयोजक हुन्छ । आयोजकले रुमलाई आफू अनुकूल चलायमान बनाउन र नाम दिन सक्छन् । आयोजकसँग श्रोतालाई वक्ता बनाउने, म्युट/अनम्युट गर्ने र वक्तालाई निकाल्नेसम्मको अधिकार हुन्छ । यो एपलाई ५० लाख बढिले डाउनलोड गरिसकेका छन् ।